Amafomu Amathiphu Kumelwe Ukwazi Nge-Folding Stage Stage
Yiba Ngcono Kakho --- Shanghai CL UKUHLELA
Yenza okusemandleni akho futhi ube okusemandleni akho, wamukelekile ukufunda lesi sihloko futhi wazi kabanzi mayelana namaqembu
Indlela Yokukhetha Isiteji Esifanelekayo
Uma ungakathengi i-aluminium esiteji esingaphambili ngaphambili, mhlawumbe ungathola impendulo kusuka kokulandelayo.
Zimbalwa amathiphu mayelana nombukiso omkhulu wembukiso
Ingabe unayo imibono mayelana nebhokisi elikhulu lokubukisa, kusuka kulokhu kutholakala impendulo
Izinzuzo ze-3 zokuboniswa okuboniswayo okuboniswayo
Kulandelwe ukuthuthukiswa kokunyathelisa kwe-tee-sublimation ye-tee tekhnoloji yakamuva, ukubonakala kwendwangu embukisweni kuwuthandwa kakhulu.
Digital udayi Sublimation ukuphrinta ubuchwepheshe ihlanganisa ne inzuzo ozimele Seamless obukhulu ukuma, ngaleyo ndlela okungukuthi kwenza Indwangu isibonisi ukuma abe inzuzo enkulu phezu ekhombisa bendabuko,
Zimbalwa amathiphu okufanele wazi mayelana netende lomcimbi
Izakhiwo zethempeli ezihlukile, okuhlinzeka ngezixazululo eziphelele ngekhwalithi engcono kakhulu yezicelo eziningi. Uzofunda ifomu elikhulu lesi sihloko
Ungakhetha kanjani izigaba eziphathekayo zomcimbi wakho?
Ingabe udidekile kanjani ukukhetha ekahle ephathekayo esiteji Equipments umcimbi wakho noma show, kulesi sihloko kuzokusiza kubekeni.
CL Stage Truss emidlalweni yama-Asian 2018
I 2018 Jakarta Asian Games izobanjelwa kusukela Agasti 18th, 2018 kuya ku-September 2nd, 2018 e Jakarta, Indonesia. Ngomhla ka-Agasti 18th, emcimbini wokuvula we 18th Asian Games sasibanjelwe Pagano Stadium e Jakarta, Indonesia.
Kuyinto njengodumo noma ilungelo elikhulu baye yethu uhlelo ukukhanyisa truss wasebenzisa i-Amazing-Asia e-Asian Games.
Ungakhetha kanjani imishini yombukiso ebhokisini lakho lokubonisa ibhizinisi?
Wake wake waya embukisweni? Futhi Ungakhetha kanjani imishini ekahle yedokodo lakho?
Singathola impendulo evela phezulu.
Ikhaya Previous 1 2 OlandelayoLast - Total 14 1 uloba page yamanje / obuphelele 2 10 ngekhasi ngalinye